Nayakhabar.com: कान्छा, यात्रु बचाएपछि तिमी पनि बाँचेको भए ...!
कान्छा, यात्रु बचाएपछि तिमी पनि बाँचेको भए ...!
आर्यघाटमा अन्तिम विदाइको दृश्य कम कारुणिक थिएन को–पाइलट सन्तोष रानाको ।
१५ गतेको साँझ, आर्यघाट भरिएको थियो आफन्त र शुभचिन्तकहरुले । एमाले शीर्ष नेतृत्वदेखि सन्तोषका फ्यानहरुसम्म कसैका आँखा ओभाना थिएनन् ।
जब उसका बाबुले भने, ‘छोरा तिमीहरू दुबै जना वास्तविक हिरो हौ, जसले आफू मरेर पनि अरुलाई बचायौ । कान्छा, यात्रुलाई बचाएजस्तै तिमी आफु पनि बाँचेको भए ... !’ यतिकैमा भक्कानियो दलबहादुर रानाको छाती र अवरुद्ध भयो गला !
सामाजिक सञ्जालहरुमा सन्तोषको अन्तिम क्षण याद दिलाउने अविश्मरणीय तस्वीरहरु छन्, जसमा फूलैफूलको मालामा सजिएको को–पाइलट रानाको पार्थिव शरीर र अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनेहरुको माँझमा उनका बाबु र दाजु कारुणिक ढंगले डाँको छाडेर रोएको फोटो ।
अस्ति शुक्रबार दिउँसो कालिकोटमा आकस्मिक अवतरण गर्दा एअर काष्ठमण्डपका चालक तथा को–चालक ९ यात्रु बचाउन सफल भई आफूले भने मृत्यु वरण गरेका थिए । कारण, समयमै उद्धार तथा उपचार अभावमा घाइते पाइलटद्वय न्यौपाने तथा रानाको केही समयको अन्तरालमा देहान्त भएको थियो ।
आँखा त सबैका रसिला भए । बाँच्ने यात्रुहरुसम्मले आफू मरेर यात्रु बचाउने ती दुई पाइलटलाई मनभरि सजाए ।
तर के गर्नु, एउटा अभाव सबैका सामू छाडेर गयौ .... तिमी
सन्तोष राना र दिनेश न्यौपाने
अमर रहू ...!